Abantu abaningi bayazi ukuthi Sberbank "Avtoplatezh Umbuso amasevisi" linikeza ukuxhuma zonke amakhasimende ayo. Lesi sici ngokwako abaningi bajabule. Ikakhulukazi labo njalo ku-akhawunti inemali. Phela, uma bhala-off lemali esele ngeke kukhona izinkinga. Konke mayelana "Avtoplatezhe kwezindlu kanye nezinsiza ohlanganyelwe" abafundi uyofunda ngemuva kwalokhu ngokugcwele. Yiziphi izinzuzo nezingozi zalesi simiso babe? Yini okufanele I sinake? Njengoba lokhu kungenzeka? Ingabe amakhasimende aneliseke isiphakamiso?
Kuyinto imfihlo ukuthi Sberbank "Avtoplatezh amasevisi ishayise" linikeza ukuxhuma bonke abasebenzisa amakhadi asebhange. Kodwa onjani ithuba wukuthi? Kufanele I sinake ke?
"Avtoplatezh" - kuwukusabela okuzenzakalelayo bill lokukhokha noma umthamo wemvula ngokuzenzekelayo ibhalansi (isib, yocingo). Isici Ukugunda kakhulu - nalo ungakwazi akhohlwe nya noma yiziphi izinkokhelo ezenziwa njalo. I ukuhlinzwa ethandwa kakhulu - i- payment for services kamasipala. Ungaxhuma "Avtoplatezh" wakho lapho ngosuku oluthile bayolotshwa phansi off kusuka ku-akhawunti izimali zakho ngoba ukusetshenziswa kwalezi noma ezinye amathuba ezihlobene izindlu kanye nezinsizakalo zomphakathi.
Nokho, akubona bonke weneliseka lesi sici. Ngakho-ke, izakhamuzi ngokuvamile cabanga isiphakamiso, esinikela Sberbank. "Avtoplatezh ngoba Tinsita" muhle uma kuziwa nokukhokhwa izinkokhelo isilungisiwe. Khona-ke ungakwazi kalula ukulawula ukuphuma nokungena kwezimali ekhadini.
Kodwa iningi izinkokhelo ziyashintsha ngobukhulu njalo. Ngokwesibonelo, i-ukukhanya noma amanzi. Ngokuvamile, la masevisi zikhokhelwa imitha ukufundwa ukuthi ungakhululekile kakhulu nge ukuqaliswa kwe-ukudonsa ngokuzenzekelayo yalezi nezinye amathuba ahambisana nokuba inkonzo amafulethi.
Ngakho, inani labantu uphakamisa lo mbuzo: "Futhi kudingeka avtoplatezh lo?" Wonke umuntu impendulo has yena. Ngokuvamile, le sevisi uxhuma kuphela kulezo zimo lapho udinga ukukhokha izikweletu nge kusengaphambili isilungisiwe. Ngokwesibonelo, igesi, ucingo noma i-Internet.
Kuyinto imfihlo ukuthi ngeke ukhokhiswe imali uma ukukhokhela izindleko zakho ngokusebenzisa Sberbank. "Avtoplatezh ngoba Tinsita" azodinga isinxephezelo encane yemali. Leli phuzu libuye ngokuvamile waphawula njengoba ukuntuleka iziphakamiso amakhasimende. Abaningi bakholelwa ukuthi kungcono ukulondoloza imali, kodwa ukwenza inkokhelo ngaphandle ukudonsa ngokuzenzekelayo izimali kusuka ekhadini. Ikakhulukazi uma kuziwa esiningi.
Bangaki kufanele ukhokhe ukusebenzisa isevisi, alinikela amakhasimende Sberbank ( "Avtoplatezh")? amasevisi zomphakathi (kulokhu Commission% 1 kuphela inani kuthengiselana ngalinye), ungakwazi ukhokhe "premium" elincane ngeke ngikwazi ukukhokhela ngisho izakhamuzi avareji. Qaphela: esiphezulu isigwebo izimali ayikwazi ukudlula ruble 1000.
ongakhetha abahlukahlukene yokukhokha
Lokho linikeza amakhasimende ayo Savings? "Avtoplatezh amasevisi ishayise" okwamanje inikeza izinketho eziningana for bhala-off imali kwi-akhawunti yakho. Ungakhetha elinye izikimu ezihlongozwayo phakathi isevisi ukusebenza. Uma wayefisa, njengoba amakhasimende athini, kungenzeka ukushintsha lokhu imali uhlelo ukudonsa.
Yini ongakhetha khona? Okokuqala, kungenzeka esikhathini esithile ukushaja ibhalansi yakho ngokuqinile lemali osikweleta. Lolu hlelo kuyasiza ezimweni eziningi. Okwesibili, amaklayenti unekhono ukukhiqiza ethize bhala phansi imali wamisa usuku.
Abaningi ozama ukuthola izinzuzo nezingozi izipesheli lanamuhla. Yini lezimanga futhi uyakuthokozela amakhasimende ayo Savings? "Avtoplatezh izinsiza zikamasipala 'linenani omkhulu eziwusizo. Akunandaba ukuthi hlobo luni lasebhange uhlelo oyikhethile.
Phakathi izinzuzo ngokuvamile wazi ekwazisa amakhasimende mayelana nokusetshenziswa oluzayo yenkokhelo. Futhi, ngemva kokuhlinzwa nakanjani bazothola i-SMS umyalezo ngolwazi mayelana kuthengiselana. Kuyinto elula kakhulu: ungakhohlwa lapho namarisidi yakho uzokhokhelwa.
Uma imali ekhadini noma i-akhawunti akwanele, uhlelo iqala ukuhlola esele nje ngeke banezimali ezanele ukwenza inkokhelo. Njalo ezinsukwini ezingu-3 kukhona irisidi izame yokukhokha. Lawa izici "ngezidingo Avtoplatezh." ikhasimende Izibuyekezo Sberbank ngoba ukwazisa futhi njalo ngibheka balance akhawunti uhola ikakhulukazi omuhle. Kwanele usethe ukukhokhelwa Umbuso izikweletu njengoba kulungile! Futhi ungakwazi kuphela uzitholele namarisidi ngokwenza izinkokhelo!
By the way, sisuke sicabanga umsebenzi kwesikhathi limited okumele kwenziwe inkokhelo kuzo zonke invoice. Kuyinto 9 ekuseni isikhathi eMoscow. Uma avtoplatezh luwela ngempelasonto noma ngeholide, le ukudonsa senzeka ngesikhathi esimisiwe. Kodwa supply ngokushesha imali wesevisi imisiwe - ulinde isikhathi imayelana 3 izinsuku. Zonke ngendlela efanayo njengoba uma usebenzisa i-EFT ezivamile.
Lows enkonzweni, futhi. Yini hhayi kunakwe Savings? "Avtoplatezh for ngezidingo," - kungenzeka ezinhle. Kodwa engenzi ivumelane wonke umuntu. Lokhu kubangelwa amaphutha eziye waphawula amakhasimende.
I negative lokuqala - Commission. Nakuba ayeneminyaka ingenkulu kakhulu, eziningi unganelisekile ngisho overpaid kancane ngoba Tinsita. Amakhasimende uncamela ukwenza inkokhelo Umbuso izikweletu bebodwa, kodwa akukho ikhomishana.
Eyesibili ethile - wukuthi inkampani Sberbank "Avtoplatezh ngoba Tinsita 'imitha ukufundwa ukuthi uthathe hhayi ku-akhawunti. Akusebenzi ngokusebenzisa leli thuba ukuze adlulisele lokhu kwaziswa. Lokhu kwenza kube izinkokhelo zingavumi kakhulu encike ukufundwa imitha. Ungasetha bhala-off imali inkokhelo esinqunyiwe amasevisi athile Umbuso indawo, okuyinto kude kakhulu inkokhelo Ngokwesilinganiso, kodwa uma njalo ozokhokhela kusengaphambili. Ezinye amakhasimende akuzona kakhulu uyakuthanda zalesi simiso.
Okuningi kungekho izikhalazo abalulekile lapho. Manje kubalulekile ukuqonda nokuxhuma nokunqamula lokhu kungenzeka. Ungaqala ejabulela sipho nganoma yisiphi isikhathi, ukuba ayiyeke le "Avtoplatezha" liphinde ithuba uma ufisa.
Uxhumano "Avtoplatezha" kungenziwa ngezindlela eziningana. Kodwa uma kuziwa umsebenzi, okuyinto yakhelwe ngezidingo, kuyodingeka wenze kuphela ngokusebenzisa isevisi "Sberbank Online".
Isigaba sokuqala - ukugunyazwa. Kumele kube ungene ngemvume "Sberbank Online" uhlelo, bese ufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi ukuze ungene ngemvume iphrofayela yekhasimende Sberbank sika. Ungenza idatha yesikhathi esisodwa. Ezithathwe ngokuzimela we ATM Savings Bank. Ukuze wenze lokhu, khetha imenyu amasevisi "Sberbank Online", bese uchofoza entweni "Thola iphasiwedi ngemvume ngesikhathi esisodwa." Ukubhalisa kuyinto efiselekayo ukukhiqiza ngosizo abasebenzi ebhange. Ngokuvamile, isevisi "Sberbank Online" ixhunyiwe ngokushesha ngemuva kokuthola plastic.
Hamba kusayithi yesevisi, bese ufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi. Ngokulandelayo, uqinisekise okokufaka usebenzisa ikhodi, okuzokwenza eza yeselula. Ungakwazi dlulelani esinyathelweni esilandelayo.
Ingabe unentshisekelo inkampani Sberbank "Avtoplatezh for Izinsiza?" akhawunti yomuntu siqu lapho 'Sberbank Online "kuzosiza ukwenza ukuxhumana. Nakani ohlangothini kwesokudla sewindi esivula emva login. Chofoza lapho emgqeni "avtoplatezhi Kwami" - "Xhuma".
Okulandelayo, funa yokukhokha. Ukuze kube lula, sebenzisa imininingwane kusuka namarisidi. Gcwalisa zonke izinkambu ezidingekayo wesevisi ngayinye idatha ezahlukene. Kodwa iningi kwaziswa kutholakala phakathi:
akhawunti phambi lokukhokha komunye oyedwa sika;
ikhadi ngawo ukubhala off imali;
Isinyathelo esilandelayo - ukubeka icala. Emasimini ekhethekile adalule uhlobo namarisidi lokukhokha, setha lemali okumele ukwesulwa. Ungakhohlwa ucacise ukuvama kusebenze isevisi "Avtoplatezh". Manje ungachofoza "Yenza isicelo". Hlola kokuthola yonke idatha yokuqala, bese uchofoza ku- "Qinisekisa nge-SMS» "Uzobona inkambu ukuqinisekisa ikhodi -. Utawuphindze yeselula Manje ngesikhathi esimisiwe ngekhadi lakho ezizayo ngeke ngokuzenzakalelayo kwenziwe uvele imali kulabo noma amanye amasevisi ishayise ... inqubo yawo wonke amarisidi okufanayo.
Indlela ukukhubaza "Avtoplatezh for Izinsiza?" Savings Bank inikeza ukukwenza ngosizo "Sberbank Online" inkonzo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukugunyazwa ohlelweni, bese uvakashele "I-akhawunti yami". Kuyo, ubheke yemenyu "avtoplatezhi Kwami" - "Management".
Lapha ungakwazi ukushintsha izilungiselelo imisebenzi ekhona. Ukuze ukhethe ukuphuma kwenkokhiso othomathikhi kwabanye noma ezinye namarisidi, qhafaza inkinobho ethi "Khubaza" phambi umugqa okuhambisanayo. Ngokulandelayo, faka ikhodi yokuqinisekisa. Yena izothunyelwa kuwe umlayezo wombhalo.
Imikhiqizo ehleliwe amabhange
Sberbank ikhadi: esikhundleni sawo etimeni letehlukene
I-Marasmus - kuyini lokhu? I-Marasmus: izimpawu
Fathom - lena kangakanani? Bangaki amayadi angu e imitha kanye esingaphezudlwana kwekhilomitha
Grand Park Lara 5 - ngamaholide ezongayo elibizayo Turkey
Iyini i-cascade: ikhanda lezemfashini lezinwele ezimfushane, eziphakathi nesikhathi eside
Rubens wesifazane. lokubonga ebuhleni
Amathiphu zendlela ukuqala nyangazonke
Ukudla kwezinja "i-Biomill": incazelo yomkhiqizo nokubuyekezwa ngakho